Warar dheeraad ah oo laga helaya kharajkii Dawlada Australia ku bixisay musaafurinta haweeney Soomali xaamilo ah | Radio Baidoa
Guriga Barnaamijyada Warar dheeraad ah oo laga helaya kharajkii Dawlada Australia ku bixisay...
Warar dheeraad ah oo laga helaya kharajkii Dawlada Australia ku bixisay musaafurinta haweeney Soomali xaamilo ah
(October 22 2015) Qandaraaslayaal u shaqeeya Dowladda Australia ayaa soo bandhigay in Dib-u-celinta Haweeneydaasi oo magaceeda lagu soo koobay Abyan lagu bixiyey in ka badan 130,000 Dollar, iyadoo loogu kireeyey Diyaarad Khaas ah oo nooceedu ahaa Boeing 737 BBJ Jet.
Bishan 16-dii ayaa waxaa Abyan si qarsoodi ah Diyaaradaasi looga soo qaaday magaalladda Sydney, iyadoo lagu celiyey Xaruntii Qaxootiga ee horey loogu kufsaday.
Dowladda Australia waxay sheegtay in Abyan iyada go’aansatay in dib loogu celiyo Jesiiradda Nauru, balse Haweeneydaasi waxay sheegtay in si khasab ah loo soo masaafuriyey.
Koox u dooda Xuuqda Qaxootiga oo lagu magacaabo The Greens ayaa sheegtay inay Garyaqaan u qaban doonaan Abyan, si uu uga taageero dhinaca Sharciga dacwadda ka dhanka ah Dowladda Australia.
Afhayeen u hadashay Kooxdaasi ayaa sheegtay in ay ka codsadeen Dacwad-baaraha Dowladda ka dhisan Jesiiradda Nauru, Philip Moss inuu qaab Garyaqaan Madax-bannaan u tagaeero Haweeneyda Soomaalida ee ay rag shisheeye ah kufsadeen bartamihii bishii July ee sannadkan.
Dhinaca kale, Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Australia ayaa qoray inay Abyan horey uga soo qaxday dagaalladda ka socday Somalia, waxayna 2 sanno ka hor Tahriib dhinaca Badda ku soo gaartay Jesiiradda Christmas Island ee Australia.
Bishii November ee sannadkii 2014-kii, Mas’uuliyiinta Jesiiradda Nauru waxay Abyan u aqoonsadeen inay tahay Qaxooti Dhab ah, kadib, markii ay sheegtay inay Somalia ka soo carartay sannadkii 2007-dii iyo inay Qoyskeeda ku geeriyoodeen Hoobiye ku habsaday.